I-Semalt ichaza ukuthi yikuphi okushicilela ukuchitshiyelwa ku-SEO
I-majority of entrepreneurs kanye ne-optimizers de moteurs de recherche bakholelwa ukuthi ungakwazi ukufakwa ohlwini olusha nge-Google uma ungena ezinkampanini eziningi ezinkampanini yakho. Ngaphandle kwalokho, abanye abantu abathandekayo ukuthi ingxenye ye-content ingabe isilinganisa kanye nokuthuthukiswa kwemininingwane ye-engines uma ihlukaniswa izikhathi eziningi. Lokhu kukhona amakhophi amaqiniso. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google" - casino online bonus. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Bhala ukubuyekeza Ngaphandle kokuba kutholakale ukwaziswa okungukuthi ukwaziswa okuye kwabekwa ngamaqembu amaningi kubhekana nezinhlangano zomphakathi ezinabantu abaningi abafake izixhumanisi, i-Google iqaphele ukuthi izingxenye zomphakathi zidlala indima ebandleni. Ngakho-ke, ukufakazela ukuthi ngaphezu kwezinxenye ezithinta ukufakwa kwesibalo kanye ne-elevé is unique un demi-vérité et un fait tout à fait trompeur.
uJack Miller, ophethe i-réussite client de Semalt , uchaza ukuthi kungani le nkinga is hhayi enkulu kakhulu repandue dans le référencement de nos jours et comment l'éviter dans votre pratique.
Le genre des demi-vérités
Kukhona amathuba okuba ukuthi i-demi-vérités isiphephelo esinezimpendulo ngokuphelele. Les mythes et les idées fausses are normally destinés aux personnes qui ne font pas partie de l'industrie. Ngaphandle kwalokho, imboni ye-SEO is inondée de demi-vérités car in the majority of the cases, they do not work with faits directs. Le fact que les algorithmes de tous les moteurs de recherche, y compris Google, sont les meilleurs secrets, cela signifie qu'ils ne peuvent pas révéler ce qu'ils considèrent lors du classement des résultats, mais ils ne peuvent donner que des indices. Ngesinye isikhathi, i-idée iyatholakala kalula uma lokhu kungabonakali..Ngokwesibonelo, ungaqukatha amaqembu amaningi abantu abaningi amathuba okuba ungenele, kepha lokhu akuyona ingxenye yomphakathi owenza lo msebenzi. Ngakho-ke, phezu kwalezi zinhlelo ezifanele thina esizisebenzisayo mayelana nezinhlangano zomphakathi, kungukuthi u-demi-vérité elula ukuvuma.
I-rythme de l'industrie
Isikhathi sokuphuthumayo se-industry SEO isingeniso se-uninformation. Yize ukuthi i-Google iyahambisana ne-calendrier de diffusion lentuthuko kanye nokuqhubekayo, i-montée en puissance, ukuhlinzekwa kobuchwepheshe obusha kanye nezitayela zokucwaninga ezenza kube nzima ukuthola izinkampani zokucinga. Cela impikiswano ehlukahlukene mayelana nokwaziswa okungahambisani nalokhu, imoto onolwazi olwengeziwe lungase lube lula ukungabi yinto engafanele, futhi abantu bahlinzeka ngezikhathi eziningi ulwazi olungafanelekile ukuba baqale ukufaka olunye ulwazi noma ukuvuselelwa. Ukuqonda ulwazi ngezingqinamba kubalulekile, kodwa ukuhlola okusheshayo kungaholela ekuqondeni okungaqondakali kwalokhu okungahambi kahle. Ngempela, ngokusheshisa okusheshayo, ulwazi olubi lungase lubekwe eceleni kwenkantolo futhi lungase lubekwe isikhathi sokulungisa ukulungiswa kwesikhathi esisodwa.
Amazwana angakugwema ukungahloni kahle
ama-reférences croisées. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Bheka umthombo onikeziwe oqinisekisa lokho okushiwo yi-source yamanje.
Tshela izinkomba ezibonakalayo. Uma un rapport unikeza ukwaziswa jikelele, isibonelo, cinga idatha, imininingwane kanye nezinombolo ezitholakala kalula kwezinye izinkampani.
Qinisekisa izinsiza zakho. Ngokwesibonelo, uma umuntu noma i-hasard enikezela ulwazi mayelana nama-tactiques de référencement, uzobe esebenzisa olunye ulwazi olukhethile olukhethile
Dlulisa amehlo akho. Essayez de refuter certains de kho kholwa you ncisheka you ncisheka the ultimate ultimate.